Faallo:-Madaxweyne Mustafe Cagjar Iyo Wasiir Axmed Shide Midkee Ku Guulaysan Doona Hogaaminta Xisbiga Deegaanka Soomaalida Itoobiya?. |
Faallo:-Madaxweyne Mustafe Cagjar Iyo Wasiir Axmed Shide Midkee Ku Guulaysan Doona Hogaaminta Xisbiga Deegaanka Soomaalida Itoobiya?.
Jigjiga(GNN):-Waxaa shalay si rasmi ah magaalada Jigjiga uga furmay shirwaynaha xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Soomaalida oo socon doona ilaa saddexda bishan. Shirwaynahan oo ah kii 10-aad waxaa ka qaybqaadanaya ergooyin kor u dhaafaya 1,300.
Ergooyinkaas waxaa laga soo kala xulaa 93 degmo iyo 6 maamul magaalo oo ku yaalla Dawlad Deegaanka Soomaalida kuwaas oo mid kasta loo qoondeeyay 13 xubnood. magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka itoobiya iyo magaalada Diri Dhaba oo ah caasimadda labaad ayay iyaguna ka yimaadaan min 19 xubnood.
Ergada ayaa lagu wadaa in ay noqdaan 1,325, balse waxaa codaynta xaq u yeelan doona in kabadan 600 oo kali ah. Shirarkii hore ee xisbiga waxaa lagu soo dooran jiray ugu yaraan 45 xubnood oo golaha dhexe ah iyo in ka badan 10 xubnood oo guddi fulineed ah.
Wargeyska Addisstandard ayaa sheegay in uu xogo ku dhaw xisbigu u sheegeen in dib loo dooran doono wasiirka maaliyadda Itoobiya Axmed Shide Maxamed ahna guddoomiyaha hadda ee xisbiga laakiin, waxa uu wargeysku shaki galiyay in madaxweyne Mustafe Muxumed Cagjar hannan doono guddoomiye xigeenka xisbiga.
Mustafe Cagjar ayaa darajo ahaan warbaahinta Itoobiya ku sheegta masuulka labaad ee gobolka Soomaalida iyada oo guddoomiyaha xisbiga laga saraysiinayo laakiin, caqabada ugu weyn ayaa lagu sheegay in aanu madaxweyne Cagjar xisbiga xubin ka ahayn maaddaama uu hore u ahaa shaqaale Qaramada Midoobay oo xilka qabtay kadib rididii Cabdi Ilay. Waxa kale oo caqabadaha uu wajahayo lagu sheegay in aanay isku san bannaanayn wasiir Shide.
Madaxweyne Cagjar ayaa hore ugu eedeeyay wasiir Shide in uu isku dayay afgami xilka lagaga tuurayay waxaana khilaaf soo shaac baxay oo arrintan ku saabsana lagu soo afjaray kulan ra’isal wasaare Abiy Axmed kula qaatay Addis Ababa Shide iyo Cagjar laakiin, waxa la tuhunsan yahay in aanu wali dhammaan loolankooda. Waxa jiray shir bulshooyinka qaar dhawaan ku qabsadeen Addis Ababa oo lala xidhiidhinayay wasiir Axmed Shide laakiin, Mustafe Cagjar cambaareeyay.
Dhinaca kale waxa gobolka Soomaalida hadheeyay awood maroorsi qabyaaladaysan “Soomaali haddaysan qabiil dayn karin ugu yaraan midkooda u aqoon badan, u sharaf badan, u hawl karsan halaga soo xulo,” Sidaas waxa yidhi Dr Cabdiwahaab Xaashi oo bare ka ah jaamacadda Jigjiga oo BBC-du wax ka waydiisay loolanka qabyaaladda.
Hoggaanka ugu dambeyn kasoo bixi doona iyo qorshayaasha shirka lagu ansixin doono ayaa ah kuwa lagu wajihi doono doorashooyinka sannadka dambe ka dhici doono Itoobiya, xilli loolan adag ay dhankooda soo bandhigi doonaan xisbiyada mucaaradka ah sida ONLF oo isu soo baxyo iyo wax olole doorashooyin u eg ka wadda guud ahaan deegaanka.
Waxay noqonaysaa markii koowaad oo xisbiga tallada haya uu la kulmo loolan muddo aad u dheer kadib markii isbadel uu ka dhacay dalka Itoobiya, lana furfurey siyaasadda dalkaas.